Isilinda esenziwe ngombhobho se-ISO9809, China ISO9809 Isilinda lombhobho abavelisi, Abaxhasi, Umzi mveliso - Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
SinoCleansky ubonelela zonke iintlobo iisilinda zegesi. ISO9809 ityhubhu yombhobho ojikelezwe ngumgangatho othunyelwe ngokubanzi kwilizwe jikelele, kubandakanya uMbindi Mpuma, mpuma Asia, Afrika, uMzantsi Melika, uMzantsi Asia, njl.
Isilinda esenziwe ngombhobho we-ISO9809
Ingxelo yeSinoCleansky Factory ibonisa zonke iimvavanyo ezifunwa yi-ISO9809 std, ezibandakanya: Uvavanyo lokwenziwa kweekhemikhali; Uvavanyo lomzimba njengoVavanyo lwaMandla oQinisekisiweyo; Uvavanyo lwaMandla oMveliso, uVavanyo lweXabiso leMpembelelo; Uvavanyo lokugqabhuka, njl.
Isilinda ye-ISO9809 yenziwa ngumbhobho wentsimbi. Izinto ezinje nge-37Mn, 34CrMo4, njl.
Ngokubanzi, iisilinda ziya kuthunyelwa ngesingxobo se-20ft, ukuba ngaphandle kwepallet, ubungakanani bokulayisha zii-1400pcs ze-10L, ii-480p ze-40L, 350pcs ze-50L kunye ne-245pcs ze-68L.
Kuthekani ngentsimi edumileyo esebenzisa olu hlobo lwesilinda?
Iisilinda zethu ukukhonza abaxhasi kulo lonke ihlabathi, kuquka mveliso igesi, abasasazi irhasi njalo njalo, esetyenziswa ngokubanzi mveliso, ukulwa umlilo, zonyango, njl